०७८ मंसीर ०९ गते विहिबार ई.सं. २०२१ नोभेम्बर २५ ​तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य - नेपाल र नेपालीको पहरेदार
०७८ मंसीर ०९ गते विहिबार ई.सं. २०२१ नोभेम्बर २५ ​तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
मेषः राजनीति तथा समाजसेवामा जनतको काम गर्न सकिने हुनाले मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । माया प्रेमको डोरो कसिने तथा परिवारका साथ घरमै बसेर मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । पढ्ने लेख्ने काममा थोरै समय दिएपनि भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ।
वृषः सानो प्रयत्नले राम्रा तथा उपलव्धी मुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । पढाई लेखाईको लागि समय उत्तम रहेको छ भने खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रबाट भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । प्रेम सकारात्मक बाटोमा बढ्नेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने धार्मिक यात्रा हुने प्रवल सम्भावना रहेको छ । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला।
मिथुनः बिहानको समय राम्रो रहेकोले व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । पढाई लेखाईमा प्रतिस्पर्धी हरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । आफन्त तथा सहपाठीहरुबाट सुनिने शुभ समाचारले उत्साह जगाउनेछ । माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ। मध्यान्हबाट समय मध्यमय रहेकोले भौतिक सम्पत्ती तथा विलाशी वस्तुका प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला।
कर्कटः फेन्सी तथा विलाशी वस्तुको व्यापारबाट मनग्गे आम्दानी हुनेछ । एकल तथा साझेदारी व्यवसायमा लगानी बढाउन सकिनेछ। व्यापारकै शिलशीलामा लामो दुरिको यात्रा हुनेछ । साथि संगि तथा ईष्ट मित्रबाट उपहार प्राप्त हुनेछ । माया प्रेममा नजिक हुन सकिने तथा पति पत्नी बीच विश्वासको वातावरण बढेर जानेछ । पढाई लेखाईमा मन जाने तथा अरुलाई पछि पार्दै नतिजा आफूतिर ल्याउन सकिनेछ।
सिहंः कुनै पनि विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा एक कदम अगाडी बढ्न सकिनेछ । सत्रु परास्त तथा पुरानो रोगबाट उन्मुक्ती पाईनेछ । नियम संगत गरेका काममा हुने फैसला तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । नोकरीमा बढुवा हुने योग रहेको छ । प्रेममा सामिप्यता बढ्ने तथा भेटघाटमा समय व्यातित हुनेछ । पछी लाभ हुने काम शुरु गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले अरुभन्द अग्र स्थानमा तपाईको नाम आउनेछ । खर्च बढेपनि उपलब्धी मुलक कामहरु हुनेछन्।
कन्याः बिहानको समय मध्ययम रहेकोले स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ । कार्यक्षेत्रमा समर्थन गर्नेभन्दा आलोचना गर्नेहरु सक्रिय हुनेछन्। मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जानेछ भने अध्ययनकै शिलशीलामा लामो दुरिको यात्रा हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा लगानि बढाई मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ।
तुलाः साहसी तथा पराक्रमी काम गरेर प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ । भौतिक साधन स्रोत जुट्नाले काम गर्न सहज हुनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाई आफ्नै पक्षमा पार्न सकिनेछ । कृषि तथा वित्तिय क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कामबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । तर पनि आमा तथा आफन्त सँग टाडिएर यात्रा गर्नु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । सवारी साधको प्रयोग गर्दा वा जग्गा सम्बन्धी काम गर्दा ध्यान दिनुहोला।
वृश्चिकः व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा सापटि दिईएका रकमहरु फिर्ता आउनाले दैनिकी सुदृढ हुनेछ । आफन्त तथा कुटुम्वबाट सहयोग पाईनेछ भने मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । माया प्रेम तथा जीवन साथीको भरपुर सहयोग पाईनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउनेछन् । छोटो तथा उपलब्धी मुलक यात्रा हुनेछ।
धनुः व्यापार बढ्नुको साथै आम्दानीमा बढोत्तरिको योग रहेको छ । पारिवारिक जमघटमा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नुको साथै रमाईलो वातावरण समय व्यतित गर्न सकिनेछ । गाएन तथा कलाकारीता क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरुले नाम तथा दाम दुबै कमाउन सक्नेछन्। सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचार र लेखहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ।
मकरः बिहानको समयमा लामो दुरिको यात्रा हुनेछ भने बिदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागी समय राम्रो रहेको छ । मध्यान्हबाट राजनीति तथा समाजसेवामा भनेजस्तो समर्थन पाईने हुनाले पद प्राप्तीको योग रहेको छ । खोजीमुलक क्षेत्रमा रुची बढ्ने तथा अध्ययनमा मन जानेछ। प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ । व्यापारबाट मनग्गे धन आर्जन हुनेछ।
कुम्भः बिहानको समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा समय लगानी गर्नेहरुका लागि समय राम्रो रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । मध्यान्हबाट पढाई लेखाईमा मन नजादा भनेजस्तो नतिजा हात पर्न सकिने छैन । काम गर्दा वा सवारी चलाउँदा ध्यान दिनुहोला द ण्ड तथा जरिवाना हुन सक्छ । स्वास्थ्यमा समस्या आई खर्च बढ्ने योग रहेको छ।
मीनः पैत्रिक धन तथा सम्पत्ती को प्रयाग तथा परिचालन मार्फन मनग्गे धन सम्पती जोड्न सकिनेछ। बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा लगानी हुनेहरुका लागि कारोबारमा सुधार हुनेछ । विद्यार्थीहरुका लागि समय राम्रो रहेकोले नतिजा हात पार्न सकिनेछ। ईच्छा,आकांक्षा तथा मनोकामना पुरा हुने समय रहेको छ । पढाई लेखाईमा भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ।
०७८ मंसीर ११ गते शनिबार ई.सं. २०२१ नोभेम्बर २७ ​तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
०७८ मंसीर १० गते शुक्रबार ई.सं. २०२१ नोभेम्बर २६ ​तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
नेपालमा हिन्दू राष्ट्र् र राजतन्त्र पुर्नस्थापना गराउन मोदी सक्रिय
छिमेकीको एक मिटर जग्गा मिचेर घर बनाउँदा २ करोड ४० लाख जरिवाना
‘दाइले नै मलाई गोली हानेर अपाङ बनाए, अझै पुरै परिवार सक्ने धम्की आएको छ’